MITOKONA MANDRITRA NY ROA HERINANDRO NY MPIADRAIKIDRAHARAHAN’NY FITSARANA – MyDago.com aime Madagascar
MITOKONA MANDRITRA NY ROA HERINANDRO NY MPIADRAIKIDRAHARAHAN’NY FITSARANA
« Mitokona ny mpiandraikidraharahan’ny fitsarana manerana ny Nosy fa voahitsakitsaka ny zony ». Io no sora-baventy mipetraka eo amin’ny varavaram-ben’ny fitsarana Anosy nanomboka androany. Tsy nisy niasa ireo mpiandraikidraharaha ireo fa nitokona teo anoloan’ny fitsarana teo, ka samy nanao ny fanamiana avy ny tsirairay. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny sendikan’ny mpiandraikidraharaha eto Madagasikara andriamatoa Rabenandrasana Nicolas dia noferana ho roa herinandro ny fitokonana izay nanomboka androany ary hatramin’ny 05 Desambara izao. Mikatona 100% hoy izy ny fitsarana manerana ny Nosy afa tsy ny any Miandrivazo izay tsy nahazoana vaovao, sy ny any Antalaha izay niharan’ny lozam-pifamoivoizana ny solontenan’izy ireo. Raha vao tsy miasa hoy Rabenandrasana ny mpiaraikidraharaha dia tsy afaka manao inona ny mpitsara. Tsy misy ny misahana ny asa farafahakeliny fa mitokona avokoa izy ireo. Efa nisy ny dingana natao hoy ny fanazavana hatramin’ny Talata 20 novambara teo izay niantsoan’ny « Directeur génerale du programmation des ressources » ao amin’ny ministeran’ny fitsarana. Ny fihaonana mivantana teo amin’ny talen’ny kabinetran’ny ministera saingy tsy nahitam-bokany izany. Androany dia nisy ny fiantsoana ireto mpitokona nataon’ny sekretera jeneralin’ny ministry ny fitsarana. Nanambara ny filohan’ny sendikan’ny mpiadraikidraharaha fa nanapa-kevitra ny rehetra fa tsy ho any fa izy no manatona ny mpitokona. Efatongaamin’ny faratampony ny fitokonana hoy ny fanazavana ka tsy hihemotra intsony mandra-pahazo valiny mahafa-po. Tsiahivina fa ny fivoriam-be izay notanterahin’ny sendikan’ny mpiadraikidraharahan’ny fitsarana eto Madagasikara ny Talata 20 Novambra teo no nanapaka fa hanao fitokonana izy ireo manomboka androany. Fototry ny fitokonana dia ny fitakiana ny zon’izy ireo toy ny indemité de logement, transport, assitance sns…Niverina fotsiny moa ireo olona izay manana raharaham-pitsarana teny Anosy.
Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara
Nanambara ny filohan’ny SMM andriamatoa Auguste Arnaud fa ara-drariny ny fitakian’ireto mpiadraikidraharaha ireto, satria manana ny lalàna mifehy azy manokana. Ny tenako hoy izy efa niasa tao amin’ny DRH ny ministeran’ny fitsarana ka fantatro tsara ny momba ny greffier ireo. Misy lalàna mifehy hoe izao avy ny tombontsoa tokony azon’izy ireo nefa tsy nisy ny fanomezana izany. Tokony ho vahana ny olana ary tsy tokona ho valibontana no asetry izany. Tokony hojerena hoy ny filohan’ny SMM hoe inona no tsy azo vahana na azo vahana fa tsy zaza kely akory izy ireo ary misy maharary tahaka ny sendika rehetra. Manohana ny ataon’izy ireo ny SMM.
Fitsarana ny FIGN : Nahemotra amin’ny manaraka indray
Fitsarana ny raharaha BANI : mbola hitohy rahampitso indray…
Fitsarana ny FIGN : asa an-terivozona enin-taona
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 novembre 2012 Catégories Politique
6 pensées sur “MITOKONA MANDRITRA NY ROA HERINANDRO NY MPIADRAIKIDRAHARAHAN’NY FITSARANA”
26 novembre 2012 à 19 h 55 min
… dia ataovy mitokona koa ny infirmière sy sage-femme … dia tohanan’ny dokotera koa
… dia ny fitanterana …
… dia ny mpampianatra
… dia tanteraho ny tondrozotra
… dia tanteraho ny fifidianana
… dia avelao ny vahoaka hiaina ao anaty ny ara-dalàna
26 novembre 2012 à 20 h 02 min
HITSIFOTRA TAHAKAN NY HETSIKA TEO ALOHA REHETRA IO RAHA TSY TOHANAN NY LEGALISTE ,…..
KA HANGATAHANA NY LEGALISTE SY NY LEADERS HAMPIRISIKA FA TSY HANOHANA FOTSINY IREO MPITAKY NY ZOANY ,aoka izay ny resa be fa tairo ny olona rehetra HANAO NY TORA POANY @ IZAO LOZA ampizakain ny fanjakana TETEZAMITA NY VAHOAKA IZAO.
Miainga any indray ry « je m’aime » isany ! Moa ve tsy toa ireny andian-goaika ireny ! Ry damôpra sy ireo hoe mazistrà sisa no tsy eo ! Hay moa mbola misy ireo hoe mpisolo-vava koa !
Sary indray mipika indray e!!!!mbola mandeha ila ôôô
Tsy hisy VOAVIDY HITSIVALANA INDRAY EO DIA RAVA NY TSENA????
Tohizo hatr@ farany rehefa mba manao ihany ry zareo a!!hangorom-bola indray izany ny Polisy ,
izay manana saosy ihany no mahazo mivoaka rehefa tsy omby intsony ny trano .
Izay vao azoko fa mila vola hanaovana fety ny sasany dia atao indray ilay fitokonana.MAZAVA!!!
27 novembre 2012 à 11 h 28 min
Hitokona mandritry ny roa herinandro ireo mpiandraiki-draharaha, noho izany dia iza no handray ny fitoriana izay kasain’ny movansa Ravalomanana apetraka ? Sa dia natao izao fitokonana izao, mba tsy andraisana an’ilay fitoriana ?
Sa dia mitaky vola mba hividianana vorintsiloza ? Iza no ho tena dindes na dindons de cette farce ?
Dia mba ahoana koa itony ?
Satria ve nitantara an’izay zava-niseho tany atsimo dia ho gadraina ? Fa inona fotsiny no nilingilingina teny amin’ny tribune-n’ny ONU ? Aiza ity fahaizana manara-penitra momban’ny Droits de l’Homme ? Sa tsy misy bizina azo mba atao, ny fanarahana amin’ny fomba manara-penitra an’io Droits de l’Homme io ?
Mampalahelo hoy aho ny toe-draharaha ê !
27 novembre 2012 à 12 h 14 min
Fa taiza moa no mba nianarany an’izany lesy????
ialah koa ity toa lalina koh!!!handroba anie no hijanonany eo e!!
ny sisa ???????tsy haiko aloha e!!!
Ho lazaiko anareo fa ny vokatry izao fitokonana izao dia fangoronan-karena ho an’i PÔLISY
satria 450000fmg no vola alohan’ireo olona tsirairay izay tė hivoaka rehefa voasambotr’ireo
pôlisy satria tsy omby ny toerana hitazonana azy ireo dia izay manam-bola ihany toy ireo
mpangalatra tena rain-dahany no tafavoaka manohy ny asany ,fa raha tsy izany koa dia ao
ianao ,tsy misy WC fa eo ampitsanganana toy ny OMBY sy KISOA ianao no manao ny malotonao,
ao ambaninao ao ihany, dia MIJORO ireo olona ao 24h/24 mijoro ao antin’iny Kaka sy PIPY
miaraka @ FOFONA rehetra.Koa asa re ray olona???sao dia mba misy olona miray tsikombakomba
@’izany fahorian’ny sasany izany @’ireo mpitarika anreo hikomy ireo fa tena ZAVATRA MAMPALAHELO
anie ny vokatr’ilay fitokonanareo e? ry MPITSARA HAJAINA ô.
Précédent Article précédent : MANAO POLITIKA MALOTO, MAMITAKA OLONA RAJOELINA
Suivant Article suivant : RAVENONANOSY MAMITIANA :TSY AFA MIALA AMIN NY TONDROZOTRA ISIKA RAHA HIOMANA HANAO FIFIDIANANA SY HITANTANA NY FIRENENA